အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် IAS အကြီးအကဲအများဆုံး ၁၀ ဦး စာရင်း - အစိုးရအရာရှိများ
အိန္ဒိယတွင် IAS ၏ထိပ်ဆုံး ၁၀ ယောက်စာရင်း
အဓိက / အစိုးရအရာရှိများ
ဗျူရိုကရေစီယန္တရားသည်လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျခြင်းနှင့်နိုင်ငံရေးအာဏာပိုင်များအရှိန်မြှင့်တင်သောနေရာများတွင်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသော IAS အရာရှိတစ် ဦး အတွက်အခွင့်အလမ်းများအားလုံးကိုတိုက်ခိုက်ရင်းသူ၏ဖြောင့်မတ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အလွန်ခက်ခဲသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်ဤ IAS အရာရှိများသည်နိုင်ငံရေးသမားများနှင့်အခြားသြဇာရှိသူများ၏အမျက်ဒေါသကိုရင်ဆိုင်ကြရသည်။ တခါတရံလွှဲပြောင်းမှုပုံစံ၊ တစ်ခါတစ်ရံမှားယွင်းသောအမှုများနှင့်တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းတို့သည်အဂတိလိုက်စားမှုစနစ်ကိုတိုက်လှန်နေစဉ်သူတို့၏အသက်ကိုစွန့်ခွာရန်လိုသည်။
1. Ashok Khemka
Ashok Khemka တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် ၁၉၉၁ Haryana Cadre ၏ IAS အဖွဲ့၏သုတ်ဖြစ်သည် ။ သူ၏အမည်ကိုသူ၏သတင်းအတွက်မကြာခဏတွေ့နိုင်သည် မကြာခဏလွှဲပြောင်း ။ သူသည် ၂၄ နှစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ချိန် ၅၁ ကြိမ်ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်။ သူသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်သမာဓိရှိခြင်း၏ပြယုဂ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်၏ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်သူ၏ကတိသစ္စာကအမြင့်ဆုံးသောအမှုကိစ္စများကိုပင်ဖော်ထုတ်ရန်မတားဆီးနိုင်ပါ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ဤ IAS အရာရှိသည်ထုတ်ဖော်ရန်ရဲရင့်ခဲ့သည် DLF နှင့် Robert Vadra ၏မြေယာသဘောတူညီချက် အရာမီးမောင်းထိုးပြ ရူပီး၏အကျင့်ပျက်ခြစားမှု။ ရူပီးမှ 20000 ကုreေ။ ၃၅၀၀၀ ကုreေ ။ သူ့ကိုခြိမ်းခြောက်ရန်မလိုမုန်းထားသည့်စွပ်စွဲချက်စာရွက်များကိုသူအားတင်သွင်းခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်များရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်သူအားကောင်းသောအလုပ်ကိုမရပ်တန့်စေခဲ့ပါ။
yuvraj Singh အမြင့်
2. D. K. Ravi
D.K. Ravi ၏အရာရှိတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည် Karnataka ကေဒါ ။ သူသည် IAS ၏အရာရှိဖြစ်သည် 2009 သုတ် ။ သူ Kolar Distt အတွက်ခရိုင်စုဆောင်းအဖြစ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသည်အခါ။ Karnataka မှသူသည်တရားမ ၀ င်သဲတူးဖော်ခြင်းစီမံကိန်းများအားဖြိုခွဲခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်နောက်ထပ်ကော်မရှင်နာ၏တာဝန်ခံခဲ့သည်။ သူ၌ရှိသည်ဟုလူသိများသည် အများအပြားအခွန်ရှောင်ရှားသော default နှင့်ထိတွေ့ နှင့်အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးအုပ်စုများအပေါ်စီးနင်းမှုထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည်သြဇာညောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းအတွက်အကြီးအကျယ်ပေးဆပ်ခဲ့ရသည်။ သူက မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင်သူ၏နေအိမ်၌သေဆုံးခဲ့သည် ။ CBI ၏အဆိုအရသူသည်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခဲ့သော်လည်းသူ၏မိသားစုဝင်များနှင့်လူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကသူသည်အသတ်ခံရသည်ဟုထင်ကြသည်။
အဆိုပါ kapil Sharma ကပြသ 2018 သွန်း
Durga Shakti ကဲ့သို့သောအမျိုးသမီးများသည်မိန်းကလေးငယ်များအတွက်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။ သူမသည်သူမဖြစ်ခဲ့ပါသည်ထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့သည် Akhilesh Yadav မှဆိုင်းငံ့ထားခြင်းအားဖြင့် Samajwadi အစိုးရအားဗလီ ၀ တ်ကျောင်းများဖြိုဖျက်ရန်အတွက် ဦး ဆောင်ခဲ့သည် ။ သို့သော်နိုင်ငံရေးနှင့်လူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကမူထိုသို့မယူဆပါ။ သူမပြည်နယ်အတွင်းရှိတရားမဝင်သတ္တုတူးဖော်ရေးကိုနှိမ်နင်းခြင်းသည်နိုင်ငံရေးလူတန်းစားကိုအမျက်ဒေါသဖြစ်စေခဲ့သည်။ သူမနှင့်အတူသူမ၏ IAS အရာရှိခင်ပွန်း Abhishek Singh ကိုလည်းအာဏာပိုင်များ၏နှောင့်ယှက်မှုကိုခံခဲ့ရသည်။ သူသည်ပန်ဂျပ်ပြည်နယ်ရှိ IAS အရာရှိအဖြစ်အလုပ်သင်စဉ်ကသူမ Mohali အတွက်မြေယာလိမ်လည်မှုနှင့်ထိတွေ့ ။
4. အမ်းစထရောင်း Pame
အမ်းစထရောင်း Pame သည် အထက်တန်းလွှာ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့ ၀ င်ရောက်ရန်နာဂလူမျိုး Zeme Tribe မှပထမဆုံးပုဂ္ဂိုလ် ။ သူက 2008 သုတ် IAS ကိုအရာရှိ ။ အဖြစ်သူ၏ပို့စ်တင်စဉ်အတွင်း Tousem ခရိုင်၏ SDM ဒေသခံပြည်သူများနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများနှင့်အခက်အခဲများကြောင့်သူသည်သိသိသာသာလှုံ့ဆော်ခံရသည်။ မော်တာမဟုတ်သောလမ်းမရရှိနိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူသည်လမ်းတည်ဆောက်ရေးတာဝန်ကိုယူခဲ့ပြီးမည်သည့်အစိုးရ၏ပံ့ပိုးမှုမှမပါဘဲသူဖြစ်ခဲ့သည် ကီလိုမီတာ ၁၀၀ လမ်းဖောက်လုပ်ရာတွင်အောင်မြင်သည် ( ပြည်သူ့လမ်း ) ကြောင်းမဏိပူရ Nagaland နှင့်အာသံနှင့်ချိတ်ဆက်လိမ့်မယ်။ အစိုးရမှရန်ပုံငွေမရှိသောကြောင့်သူသည်ရန်ပုံငွေရှာဖွေရန်ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြု၍ ရူပီးကိုတိုးမြှင့်နိုင်ခဲ့သည်။ သိန်း ၄၀ Tousem ၏လူများကသူ့ကိုခေါ်ကြသည် 'အံ့ဖွယ်လူသား။ '
5. Tukaram Mundhe
Salman Khan ဖခင်အမည်နှင့်ဓာတ်ပုံ
Tukaram Mundhe တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် 2005 သုတ် IAS မှအရာရှိ မဟာရပ်ရှ Cadre သူသည်သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်တာဝန်မှဆည်းကပ်လူသိများသည်။ သူသည်ပြseriousနာများကိုတည့်မတ်ပေးရန်နှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုပပျောက်ရန်ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်လူသိများသည်။ သူ့ ကော်မရှင်နာနှင့်အတူလမ်းလျှောက် '' အစီအစဉ်ကို တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းနိုင်ငံသားတွေရဲ့တိုင်ကြားချက်တွေကိုသူဖြေရှင်းပေးတဲ့ Navi Mumbai မှာ NMMC ရဲ့ကော်မရှင်နာအဖြစ်လူသိများလာတယ်။ မစ္စတာ Mundhe လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သည် 12 နှစ်အတွင်းကိုးလွှဲပြောင်း သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်ရိုးသားသောသဘောထားကြောင့်
Raju တစ်ခုဖြစ်သည် Kerala ကေဒါ၏ IAS အရာရှိ နှင့် IIT ဒကျောင်းသားဟောင်းများ။ သူသည်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုဆန့်ကျင်သောသူ၏လုပ်ကြံမှုကြောင့်လူသိများသည်။ သူသည် ၂၂ နှစ်တာကာလ၌အကြိမ် ၂၀ ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည် ။ သူသည်အကျင့်ပျက်နိုင်ငံရေးသမားများနှင့်လက်အိတ်ဖြင့်အလုပ်လုပ်ရန်ငြင်းဆန်သည့်အခါသူသည်အတင်းအဓမ္မစွန့်ခွာထွက်ခွာခဲ့ရသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရာဂျူးသည်သူ၏လူငယ်များနှင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်ရန်ပင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Kerala ၀ န်ကြီး T U Kuruvilla အားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုက ၀ န်ကြီးအားရာထူးမှနုတ်ထွက်စေခဲ့သည် ။ Raju က“ ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့ဘဝမှာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုအမြဲတမ်းတွန်းလှန်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ဘေးဖယ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အရာရှိများစိတ်ဓာတ်မရသင့်ပါတယ်။ ကိစ္စရပ်များအပေါ်အခိုင်အမာရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့လူသိရှင်ကြားလက်ခုပ်သံများကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လက်လှုပ်ရှားစေသည်။
7. Anshul Mishra
Anshul ကတစ် တမီးလ်နာဒူးမှ IAS အရာရှိ ။ သူဟာထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုအချို့ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဖြစ်သူ၏သက်တမ်းကာလအတွင်း Madurai ၏ကောက်ခံရေး သူသည်တိုင်ကြားမှုဆဲလ်ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်အုပ်ချုပ်မှုတွင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်တာဝန်ခံမှုတို့ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည် လူများ၏မကျေလည်မှုများကိုဖြေရှင်းရန် Facebook စာမျက်နှာ ။ သူကလူသိများသည့်ပြ80နာများ၏ ၈၀% နီးပါးကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့သဖြင့်သူ၏ဝထ္ထုသည်အလွန်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ Anshul သည်တရားမဝင်ကျောက်မီးသွေးတွင်းများဖောက်လုပ်ခြင်းကိုနှိမ်နင်းရာတွင် ဦး ဆောင်ခဲ့ပြီး Anganwadi အလုပ်သမားများ၏မျှတစွာစုဆောင်းမှုဖြစ်စဉ်ကိုအထောက်အကူပြုခဲ့သည်။
8. Yashwant Sonawane
Yashwant Sonawane သည်သေသည်အထိအမှားများကိုတွန်းလှန်နိုင်သူတို့တွင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် Malegaon မဟာရပ်ရှ၏အပိုဆောင်းခရိုင်စုဆောင်း ; သူသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ရေနံမှောက်မှားသောမာဖီးယားဂိုဏ်းများမှရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည်။ အချို့သောမာဖီးယားဂိုဏ်းများမှရေနံမွှေးကြိုင်သောသတင်းကိုသူရရှိသောအခါသူတို့အပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစတင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်သူတာဝန်ယူနေတုန်းပဲ Popat Shine သည်ရေနံမွှေးသောမာဖီးယားဂိုဏ်းအားမီးစွဲလောင်ခဲ့သည် ။ သူ၏စံနမူနာပြရဲစွမ်းသတ္တိနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအပ်နှံခြင်းအတွက်သူကို 'အာဇာနည်' အဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။ သူ၏ရိုးရိုးသားသားပုံရိပ်နှင့်ဆန့်ကျင်။ CBI ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရသူသည်အတိတ်ကရန်ငြိုးများကြောင့်အသတ်ခံခဲ့ရပြီးမာဖီးယားဂိုဏ်းတစ်ခုမှလာဘ်ထိုးခဲ့သည်။
9. ဦး Sagayam
ဦး Sagayam က ၁၉၉၁ တမီးလ်နာဒူးတ ဦး ၏ IAS အရာရှိဖြစ်သည် ။ သူ၏အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေသည့်သူ၏တိုက်ခိုက်ရေးရပ်တည်ချက်အတွက်သူ၏ရုံးဘုတ်အဖွဲ့တွင်“ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများကိုငြင်းပယ်ပါ၊ သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအတိုင်းအတာကိုသူဖြစ်ခဲ့ခြင်းကပြုလုပ်နိုင်သည် သူ၏ ၂၇ နှစ်တာကာလအတွက် ၂၅ ကြိမ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် ။ သူသည်ပုလင်းအများအပြားမှအမှိုက်များကိုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်သဲမာဖီးယားဂိုဏ်းအပေါ်သို့ချသောအခါ Pepsi ပုလင်းစက်ရုံကိုပိတ်လိုက်သည်။ 2004 ခုနှစ်တွင်သူသည်ထောက်ပံ့ငွေဆလင်ဒါများအသုံးပြုမှုအတွက်မူမမှန်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ 2009 ခုနှစ်ဒေတာအရ, သူသည်အနည်းငယ်သာရှိခဲ့ပါတယ် ရူပီး၏ဘဏ်လက်ကျန်ငွေ။ 7172 နှင့် Rs.9 သိန်းတန်ဖိုးရှိအိမ်တစ်အိမ်။
10. Rashmi V ကို Mahesh
Rashmi ဖြစ်ခဲ့သည် သူမ၏ 18 နှစ်ဝန်ဆောင်မှု၌ 20 ကြိမ်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည် ။ TO သို့ Karnataka cadre IAS အရာရှိ Rashmi သည်အကျင့်ပျက်ပညာရေးစနစ်အားမဆုတ်မနစ်တိုက်ခိုက်နေသည်။ သူသည် Mysore ၏အုပ်ချုပ်ရေးသင်တန်းကျောင်းနှင့်ဆန့်ကျင်သူများကိုစစ်ဆေးခဲ့သည် ရူပီးတန်ဖိုးရှိမူမမှန်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ 100 ကုreေ 2008-2014 အကြား။ ဒီထိတွေ့မှုကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်ဒေါသထွက်နေသောလူအုပ်ကသူမကိုစော်ကားခဲ့သည်။ အတိတ်ကာလကသူမသည်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များကစီမံခန့်ခွဲသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်အင်ဂျင်နီယာကောလိပ်၏ထိုင်ခုံများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။
ဟိန်ဒီ mahesh babu ၏ရုပ်ရှင်ခေါ်
shahrukh khan အိမ်သူအိမ်သား mannat ၏ဓာတ်ပုံများကို
atif Aslam ဇနီးနှင့်ကလေးအမည်
Rajesh joshi (သရုပ်ဆောင်)
မွန်ဘိုင်း amitabh bachchan အိမ်လိပ်စာ